BBC Ururka lashabaab oo qabsaday Degmada balcad sida uu sheegayAfhayeenka maamul-goboleedka Hirshabeelle, Daa`uud Xaaji Cirro | Biyoguurenews.com
Home Wararka BBC Ururka lashabaab oo qabsaday Degmada balcad sida uu sheegayAfhayeenka maamul-goboleedka...
BBC Ururka lashabaab oo qabsaday Degmada balcad sida uu sheegayAfhayeenka maamul-goboleedka Hirshabeelle, Daa`uud Xaaji Cirro
Wararka ka imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in kooxda Alshabaab ay caawa weerar ku qaadeen degmadaas oo ay gudaha u galeen.
Afhayeenka maamul-goboleedka Hirshabeelle, Daa`uud Xaaji Cirro ayaa BBC-da u xaqiijiyay in Alshabaab ay ku sugan yihiin gudaha Balcad, iyagoo weerar ku qaaday dhowr fariisin oo ay ciidammada dowladda leeyihiin.
Wuxuu sheegay inay markii hore Alshabaab degmada ka soo galeen dhanka Kulanka oo ah waddada u dhaxaysa Jowhar iyo Balcad, halkaas oo uu dagaal ku dhex maray ciidammada dowladda iyo kuwa Hirshabeelle oo dhinac ah.
Waxay saacado kaddib weerar kale ka soo qaadeen dhanka waddada Basra ee Afgooye ka timaadda oo Balcad soo gasha, ciidammadeennana dib ayay uga gurteen degmada, nawaaxiga degmada ayayna ku sugan yihiin,” ayuu yiri.
Alshabaab ayaa sidoo kale la sheegay inay galeen saldhigga booliiska degmada oo ay ka sii daayeen maxaabiis halkaas ku xirnaa.
Waxaa sidoo kale jira diyaarado dul heehaabaya degmada. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa noo sheegay inay jiraan dad isaga qaxay degmada, iyagoo ka baqaya duqeymo ay geystaan diyaaradahaasi.
Daa`uud ayaa sheegay in diyaaradahaasi ay jiraan oo maamulka Hirshabeelle uu ka warqabo, hase yeeshee loogu talo-galay inay duqeeyaan fariisimaha Alshabaab, oo aysan duqeymo ka geysan doonin gudaha degmada.
Previous articleMadaxawyne Geele oo ku baaqay midnimo shantii soomaliyeed ah, maxaase sababay
Next articleToogasho ka dhacday magaalada Utrecht, Netherlands